I-Nikau Hut, indawo yokuphumla ezolileyo - I-Airbnb
I-Nikau Hut, indawo yokuphumla ezolileyo
Igumbi lakho lokulala e inqugwala sinombuki zindwendwe onguDanielle & Hayden
UDanielle & Hayden yi-Superhost
Thatha uhambo oluya encotsheni yenduli yeSiqithi iPepin kwaye umangaliswe ziimbono ezintle kumacala omabini ale fama intle. Landela uhambo olusezantsi kwaye ufumane i-Nikau Hut ibekwe phakathi kwetyholo elihle lemveli. I-adventure efanelekileyo kunye nokubalekela usapho oluncinci okanye abalobi, abanomoya omninzi omtsha kunye nendalo ezolileyo. Zama ithamsanqa lakho ekulobeni kwilitye elifikelelekayo lokuloba kufutshane nolwandle, ngelixa usonwabela iimbono ezimangalisayo zeDelaware Bay.
NCEDA UFUNDE LE NKCAZELO ILANDELAYO NGONONOPHELO
Ukhumbule ukuba eli liqonga ibe yindawo encinci ngaphakathi kodwa inendawo eninzi phandle!
- Songa ibhedi ekwayisofa yabantu ababini
- Ishawa enamanzi ashushu - ngaphandle kokuba kukho imvula iintsuku ezimbalwa, amanzi ashushu elanga aza kuphelela.
- i-2 hob yegesi yokupheka
- Umgangatho wangaphandle kunye nendawo yokuhlala
- Ikhitshi nezinto zokupheka
- Izinto zokondlula ibhedi neetawuli
- Iti nekofu
- Ukuhambahamba okuphakathi kwemizuzu eyi-40-60, iinduli
ezinyukayo - Abantwana abaphantsi kolawulo
- Kulala abantu abayi-2
- Izinto onokukhetha kuzo zokukhempisha ezixabisa i- $ 20 ngomntu ngamnye owongezelelekileyo (kufuneka uziphathele ezakho izinto zokuzikhusela)
- Ukuzinika ukutya ngaphandle kokuba iinkonzo zokutya zibuzwe kwangaphambili:
- Ukulandelelana kokutya: Sithumelele nje uludwe lwakho oluneenkcukacha kwaye siza kukunika ukutya kwinqweno elungele ukufika kwakho i- $ 40 + eyimali yerisithi.
- Ipleyiti yokwahlula itshizi $ 60
- Isidlo sakusasa esilula, ukubonelela nge-muesli, ubisi kunye nezinye iziqhamo zexesha elithile $ 10pp/kusasa. (iinkonzo zetshizi kunye nesidlo sakusasa zibanjiwe ngoku ngenxa yemigaqo ye-covid).
- Izinto zokuthenga amaqhugwane kwinqugwala: Ii-crisps ezifanelekileyo, iziselo zechicago njl. izinto ezixabisekileyo.
- ENTSHA: I-Nelson-made Aroha chocolates, ibhokisi yee-truffles ezixubileyo ezi-6 okanye ibhokisi yeentliziyo ezi-4 zonke izinongo ezahlukeneyo. Oda kwangaphambili kuba si-oda kuphela xa ifunwa ukuze ibe ntsha! Into emangalisayo kumntu okhethekileyo!
Kufuneka uqaphele nokuba kufuneka ube nezinga elithile lokuzilolonga ukuze ukwazi ukuhamba kwiSiqithi sasePengin njengoko kukho iindawo ezinyukayo xa uhamba.
Iphakheji yokukhenketha efama iquka:
- Elona nani likhulu labantu abayi-5
- Ukuboniswa kweenja kwiigusha ezimele zenziwe
- uhambo lwe-4WD olujikeleze isiqithi
- Ukucheba iigusha -
- Buza ngexabiso
Ukuba ufuna ilifti eya kwinqugwala okanye imithwalo ethathiweyo sine-4WD lift onokukhetha kuyo i- $ 60.
Nceda uthumele umyalezo kwinto ongathanda ibe siza kwenza konke okusemandleni ethu ukuze ikusebenzele!
Sihamba ngemizuzu engama-30 ukusuka eNelson City. I-Cable Bay Beach lilitye lebhanki elidibanisa iPepin Island kumhlaba ongundoqo. Isiqithi sibucala ngoko sinoxolo kwaye sizolile kwiindwendwe ezihlala ezindlini.
Umbuki zindwendwe ngu- Danielle & Hayden